The Ab Presents Nepal » ज्ञानेन्द्र शाही भारतीय गुप्तचर संस्था रअका एजेन्ट भएको खुलासा !
ज्ञानेन्द्र शाही भारतीय गुप्तचर संस्था रअका एजेन्ट भएको खुलासा !
काठमाडौं-: शनिवार बेलुकी ७ बज्दै थियो, – नेपालगन्ज विमानस्थलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईमाथि दुब्र्यवहार भयो । उनीमाथी दुब्यवहार हुनुको एउटै कारण थियो वुद्ध एयरको विमान उनकै कारण नियमित उडान समय भन्दा केही डिले हुनु ।
विमान योगेशका कारण करिव १५ मिनेट डिले भएको थियो । मन्त्री भट्टराईले पनि यो कुरा पुष्टि गरेका छन् । आफ्नै कारण प्लेन उड्न ढिलाई भएकोमा सामाजिक सन्जालमै उनले सर्वसाधारणप्रति क्षमा मागेका पनि छन् ।
तर १५ मिनेटको ढिलाईलाई मौका पर्खेर बसेकाहरुले मन्त्री भट्टराईमाथि दुब्र्यवहार गर्ने अस्त्र बनाए । उनीमाथी विमानस्थल देखि विमानभित्रै पनि केही ब्यक्तिले अशिष्ट रुपमा दुब्र्यहारको प्रयास गरे ।त्यसको नाइके थिए, – ज्ञानेन्द्र शाही । उनीसँगै रहेका तीन जना ब्यक्तिले योगेशका कारण १५ मिनेट ढिलो भएको हवाई उडानलाई लिएर स्थिती भड्काउने अनेक प्रयास गरे, मन्त्री भट्टराईमाथि दुब्र्यवहार गरे र सामाजिक सन्जालमै समेत अपशब्द लेख्दै अर्नगल प्रचारमा उत्रिए ।
१५ मिनेट ढिलो भएकोलाई एक घण्टा ढिलाई गरेको भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीहरुले विमानस्थलमा योगेशविरुद्ध स्थिती भड्काउने प्रयास गरेका थिए । तर मन्त्री भट्टराईले चुपचाप बसी कुनै प्रतिवाद नगरेपछि ज्ञानेन्द्रहरुको योजना विफल भएको थियो ।वुद्ध एयरका यात्रुहरुकै अनुसार, प्रचार गरिएको जस्तो मन्त्रीको कारण प्लेन एक घन्टा ढिलो भएको थिएन । मन्त्री शनिबार डलफिन महोत्सव कार्यक्रमका लागि कैलालीको टिकापुर पुगेका थिए ।
शनिबार नै धनगढीको अन्तिम उडानबाट काठमाडौं फर्किने पूर्वनिर्धारित तालिका बनाई भट्टराई त्यहाँ पुगेका थिए । तर, टिकापुरमा कार्यक्रम ढिलो भएपछि धनगढीको अन्तिम उडानबाट उनी फर्किन सकेनन् ।प्रतिनिधीसभाको मन्त्रालयगत प्रश्नोतर कार्यक्रम आइतबार संसदमा थियो । सांसदहरुले मन्त्रालयका बारेमा सांसदहरुले उठाउने जिज्ञासाको जवाफ उनले आज संसदमा दिनुपर्ने थियो । सोही कारण पनि मन्त्री भट्टराईलाई हिजै काठमाडौं अनिवार्य फर्किनुपर्ने वाध्यता थियो ।
उनका सचिवालयका अनुसार, त्यसपछि नै मन्त्री भट्टराईले नेपालगन्जबाट काठमाडौं फर्किने योजना बनाए र नेपालगञ्जबाट काठमाडौं उडान गर्ने वुद्ध एयरको अन्तिम उडानबाट उनी काठमाडौं फर्किन नेपालगन्ज लागेका थिए ।नेपालगन्जबाट काठमाडौंका लागि उडान समय थियो, ६ वजेर ४० मिनेट । ६ वजेर ४० मिनेटमा यात्रुहरुको बोर्डिङ्ग भएको थियो । धनगढीबाट असाध्यै धपेडीको साथ यात्रुहरुभन्दा १५ मिनेट ढिला गरी करिब ६ बजेर ५५ मिनेटमा मन्त्री भट्टराई नेपालगञ्ज विमानस्थल पुगेका थिए ।
त्यही बेला दरबारिया गठवन्धनका ज्ञानेन्द्र शाही नेतृत्वको सानो समुहले भट्टराईमाथि दुब्र्यवहार प्रयास गरेका थिए । सोही टोली मध्येका एकजनाले ‘पारसका बिरुद्ध सातलाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाएर तैले हामीलाई कति दुःख दिएको छस् ? त्यो हामीले कहाँ बिर्सेका छौं र ?’ भन्दै भट्टराईमाथि अपशब्द प्रयोग गरेका थिए । उनीहरुले विमानमा नै मन्त्रीलाई ‘अब देखाइदिने’ चुनौती समेत दिएका थिए ।
ज्ञानेन्द्र शाही लगायत उनका समुहले ‘हामी त्यसै छोड्दैनौं’ भन्दै अपशब्द प्रयोग गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका समूह पनि त्यही विमानबाट काठमाडौं फर्किदै थिए । ज्ञानेन्द्र शाहीको समूह नेपालगञ्जमा एक बिरोधसभा गर्न पुगेका थिए । त्यो सभामा पनि शाहीले सरकार र गणतन्त्रको तिव्र बिरोध गरेका थिए ।
मन्त्रीले विमानमा शाहीको उत्तेजित समूहलाई कुनै उत्तर दिएनन् । वरु मुस्कुराएरै चुपचाप वसिरहे । यद्यपी यात्रुहरुलाई आफ्नो कारण परेको असरप्रति भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै क्षमा मागेका छन् ।तर ज्ञानेन्द्र शाहीले यो घटना लगत्तै मन्त्रीलाई ‘रामधुलाई’ गरेको भन्दै सामाजिक सन्जलमा आफुले हो हल्ला गरेको भिडियो सहित स्टाटस लेखेका छन् । शाही पछिल्लो समयमा सरकार र गणतन्त्र बिरुद्धमा आक्रमक छन् ।
शाहीले गत वैशाख १८ गते आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा नआएको भन्दै सुर्खेत र कर्णालीका पत्रकारलाई ‘दलाल र कुकुर’ भनि गाली गरेका थिए । उनी साइबर अपराधमा जेठ १५ गते सुर्खेतबाट समातिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई जेल हाल्ने धम्की दिदै आएका थिए ।
जुम्लाका शाही आफुलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको बताउँदै अहिले हिडिरहेका छन् । तर खासमा उनी भारतीय गुप्तचर सस्था रअबाट पैसा लिएर उनीहरुकै योजनामा हिडेका ब्यक्ति हुन् । उनको भारतीय गुप्तचर सस्थासँगको सम्बन्धका विषयमा र उनले भारतीय राजदुतहरुसँग खिचेका तस्विरहरु यस अगाडी सार्वजनिक भएका थिए ।
नेपालको परिवर्तन प्रति दुराग्रह राख्दै चिहानमा पुगिसकेको राजतन्त्रको वकालत गर्दै अहिले उनी हिडरिहेका छन् ।(हाम्रोसवाल)
प्रकाशित मिति September 16, 2019